Millet Oligopeptide Powder- Umkhiqizi Wefektri
I-millet oligopeptide powder iyi-milig oligopeptide powder ecebe ngama-amino acid ahlukahlukene kanye namaminerali akhishwe kubelethi ngokusebenzisa i-multi-link biotechnology efana ne-low-temperature complex enzymatic hydrolysis. Inephunga elimnandi futhi ayinambitheki ebabayo, futhi ingancibilika ngokushesha emanzini.
Isisindo samangqamuzana se-millet oligopeptide powder singaphansi kuka-1000u, futhi inani lamaprotheni i-hydrolyzate lingafinyelela ku-90%, okulula ukumuncwa ngumzimba womuntu.Inempahla enhle ye-antioxidant.
Imininingwane ye-Millet Oligopeptide Powder
Igama Product Millet oligopeptide powder powder
Yini iMillet Oligopeptide powder?
Ziyini izinzuzo zeMillet Oligopeptide powder?
Imillet oligopeptide powder inomphumela osobala wokuzivikela komzimba
Imillet oligopeptide powder inomphumela wokwanda osobala kuma-lymphocyte egundane, okukhombisa ukuthi i-millet peptide ingakhuthaza ukuzivikela kwamaselula. Futhi, iMillet peptide ingathuthukisa ngokuphawulekayo umsebenzi we-phagocytic wamagundane ama-macrophage kanye nenkomba ye-spleen, ekhombisa ukuthi i-peptide yamabele ingathuthukisa ukungavikeleki komzimba ngokuzivikela okungacacisiwe.
I-millet oligopeptide powder inomsebenzi oqinile we-antioxidant
Izinga lokukhwabanisa kwe-millet oligopeptide ku-DPPH free radical lalingama-68.93%, elinganciphisa i-hemolysis yamaseli abomvu wehlise nokukhiqizwa kwe-MDA esibindini, okukhombisa ukuthi i-millet peptide inomsebenzi oqinile we-antioxidant.
 Umphumela we-immuno-modulatory we-millet peptides kumagundane
 Ukulungiswa kweMillet Peptide kanye Nomsebenzi Wayo we-Antioxidant.